Indlu encinci iTitiwane Isithili saseLiege eluhlaza - I-Airbnb
Indlu encinci iTitiwane Isithili saseLiege eluhlaza
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguCéline & Pierre
UCéline & Pierre yi-Superhost
Indlu yethu encinci ikwisithili esiluhlaza saseLiège. Indlu encinci efihliweyo kufutshane neendlela ze-bucolic ezikhokelela kwiziko lembali ngeenyawo.
Emva kweminyaka emibini yokuzenzela kunye nokwakhiwa kwendalo, iTitiwane yethu iTitiwane yonke isenkuni. Ivumba le-poplar, imisedare, i-oki kunye nepine. Ihlala ngokugungxulwa yimithi yethu, esiva amandla ayo, ngaphakathi okanye ngaphandle.
Ukubanakho ukuodola isidlo sakusasa / isidlo sasemini.
Kukho bonke ubutofotofo bekhaya elihlala iphupha lekhabhinethi. Siye sayilungisa ngokungathi sihlala apho. Unegadi, i-terrace kunye nendawo yokulala ene-hammock kunye ne-brazier. Indawo engaqhelekanga ixhotyiswe kakuhle, iyilwe kwaye ihonjiswe ngezinto ezisetyenzisiweyo, ubugcisa kunye namashishini asekhaya.
Isithili saseThier-à-Liège esiye sagcina indalo yaso.
Ukufikelela ngokulula kwiivenkile ezincinci zasekhaya. Indawo yokubhaka, imarike enqumla iindlela kunye nevenkile yetshiphu kumgama wokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Céline & Pierre
Sabelana ngeedilesi ezilungileyo zokufumana ububele, imbali, i-gastronomy, inkcubeko kunye nokufudumala kweLiège.
FIKELELA KWIZIKHOKELO ZETHU ngokunqakraza kumfanekiso wethu weprofayili kwicandelo elithi "Icetyisiwe nguCéline et Pierre" (ngezantsi).
FIKELELA KWIZIKHOKELO ZETHU ngokunqakraza kumfanekiso wethu w…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Liège